Dowladda Soomaaliya oo Xasuus Qaran u sameynaysa dadkii ku dhintey Qaraxii Zobbe | SAHAN ONLINE
Dowladda Soomaaliya oo Xasuus Qaran u sameynaysa dadkii ku dhintey Qaraxii Zobbe
MUQDISHO – Gollaha Wasiirada ay kulan ay maanta ku yeesheen Muqdisho,waxaa looga hadlay dhibaatadii xanuunka iyo murugada lahayd ee ka dhatay weerarkii 14kii October 2017 ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho.
Wasiirada ayaa falanqeyn kaddib waxay isku raaceen in xasuus Qaran loo sameeyo dadkii ku dhintay weerarkaas arxan darrada ahaa iyo in la caawiyo dadkii ku dhaawacmay,eheledii dadkii wax ku noqday iyo dadkii ku hanti beelay.
Ra’iisal Wasaare kuxigeenka Xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed(Khadar) ayaa sidoo ku dooday in maalinta 14-0ctober loo aqoonsado maalin Qaran oo lagu xasuusto dhammaan dadka ku dhibaatoobay qaraxyada kala duwan ee kooxaha argagaxisada ah ay dalka ka gaysteen.
Golaha Wasiirada ayaa dhanka kale ka doodat dardar-gelinta Barnaamijka is-xilqaan oo lagu dhisayo xarumaha danta guud iyo wadooyinka si loo soo nooleeyo bilicda dalka iyo hay’badda Qarannimo.
Wasiiru dawlaha Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamuud Xaamud oo ka war bixiyay qodobadii shirka looga hadlay,wuxuuna sheegay in ganacsatada Soomaaliyeed ay ku hawlanyihiin bixinta qayb kamid ah hantidooda si ay uga qayb qaataan fulinta dhammaaan qorshayaasha lagu xusay Barnaamijka is-xilqaan, loogana maarmo kaalmo shisheeye.